Iholo enkulu ekunokuthiwa yeyona iphambili kwiAprico.Izihlalo ezili-1477 zizonke zisasazeke kwindawo enkulu ejikelezwe bubushushu beenkuni.
Unokukuva ukuzibophelela kwisandi esigcwele kuyo yonke indawo, kubandakanya ne-acoustic reflector ehambisa isandi sesandi esiphilayo kwizihlalo zabaphulaphuli.
Phambi kweqonga: Ikhethini leqonga "Ingoma kaShinki" nguRyuko Kawabata
Isigaba esivela kubaphulaphuli: Kunye nebhodi yesandi ngaphandle
Izihlalo ngokubanzi zabaphulaphuli: Ukusuka kwinqanaba leqonga
(Sebenzisa iproscenium ehambisekayo)
Umkhono olungileyo 10m
Umkhono ongezantsi we-12m Ukuhamba kugqame iacoustic
Indlela yeentyatyambo yexeshana
Inqanaba lethutyana Noh
* Ayinakusetyenziswa xa usebenzisa isibonakalisi.
Ukujikeleza kwesekethe 3kw x 344 imijikelezo yeqonga
6kw x 12 imijikelezo yezihlalo, 3kw x 4 imijikelezo
Ikhonkco lokukhanyisa (iPanasonic Pacolith Shoot) Ukuseta kwangaphambili i-fader 120ch
Isikhokelo se-3-inqanaba lama-2,000 inkumbulo yemeko
(Mahala xa isetyenziswe njengokukhanya komsebenzi, kodwa ihlawuliswe xa isetyenziswa njengokukhanya kweqonga) 3列
ukukhanya kwesilingi 2列
Ukukhanya kokumiswa (uhlobo lwebhulorho) 4列
Ukukhanya kweProscenium 2列
Ukukhanya kwelanga 1 iseti
Upper Horizont Lower Horizont UkuKhanya 1 umqolo 1 umqolo
Ukukhanya kweenyawo Iiyunithi eziyi-8 x imibala emi-5
Ukujonga ngaphambili 60w 12 izibane / 3 iisekethi 14
(Ingasetyenziswa xa usebenzisa i-octopus)
Indawo yokuqaqamba kwepini
(Umqhubi kufuneka ayisebenzise.) 2kw xenon x 4
Umxhubi weselfowuni (YAMAHA CL-3) Igalelo: I-Monaural 64ch
Iziphumo: Xuba ibhasi 24
Stereo ibhasi 1ch
imakrofoni engenazingcingo 800MHz (B frequency band) x 6ch
Inqaku le-3 isixhobo sokuxhoma imakrofoni
Isithethi seProscenium (L / C / R)
Isithethi sekholamu esecaleni (L / R)
Iidesika ezi-6 zokubala
Iidesika ezili-12 ezinde
Iibhodi zolwazi ezili-3 (ubungakanani be-A4, ubungakanani be-B9, njl.
Izikrini ezibini kathathu
Imephu yendawo yokwamkela
Cofa apha ukukhuphela
Izihlalo ezili-14 kumqolo we-2, 11-10, zisusiwe kwizitulo ezinamavili.
Umququzeleli unoxanduva lokufaka nokubuyisela izihlalo. (Kuthatha malunga nemizuzu engama-4 ukuze abantu abane basebenze.)
Xa ufaka izithethi zethutyana, ezinye zezihlalo zabaphulaphuli zinokungasetyenziswa.
Nceda uqaphele xa usenza isihlalo esigciniweyo.
Ukwamkelwa kwizitulo ezinkulu zabaphulaphuli kwiholo ikakhulu kumgangatho wesibini.Nceda usete ulwamkelo kumgangatho we-XNUMX.
I-magnetic loop (*) ifakwe kwiholo enkulu.
Ukuze usebenzise ilogu yamagnetic, uzakufuna izixhobo zomsindo eziqhotyoshelweyo.
Ukuba ungumququzeleli ofuna ukuyisebenzisa, nceda ufake isicelo kwangoko.
Inkqubo yokuva ukuhambisa ngokufanelekileyo ilizwi eqongeni kubathengi
Kusasa (9: 00-12: 00)
Emva kwemini (13: 00-17: 00)
Yonke imini (9: 00-22: 00)
IHolo enkulu: Inqanaba kuphela
Igumbi lokuqala lokunxiba
Igumbi lokunxiba lokuqala
Inqanaba / umzobo wabaphulaphuli
Isicwangciso senqanaba elikhulu leholo
Icandelo eliwela umnqamlezo kwiholo enkulu
Umzobo omkhulu wabaphulaphuli beholo
Malunga negumbi lokunxiba, igumbi labasebenzi, njl.
Ukongeza kumagumbi okunxiba asibhozo ahlawulelweyo, iholo enkulu inegumbi labasebenzi, igumbi lokunxiba, igumbi lokulungiselela abaququzeleli, igumbi lokuhlambela abadlali, igumbi lokunxiba, igumbi labantwana lesikolo sabantwana, kunye negumbi loncedo lokuqala.
IinkcukachaUlwazi kwigumbi elikhulu lokunxiba Nceda ujonge kwi.
Igumbi lokunxiba lokuqala (kumgangatho wokuqala ongaphantsi)
Igumbi lokunxiba le1th (kumgangatho wokuqala ongaphantsi)
Iholo elikhulu le-MAP
Inqanaba / ubume begumbi lokunxiba
Igumbi lokunxiba iofisi